जलमार्गको विस्तृत अध्ययन | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय जलमार्गको विस्तृत अध्ययन
on: March 11, 2019 सम्पादकीय
जलमार्गको विस्तृत अध्ययन
नेपाल र भारतबीच जल यातायात सम्भावनाको अध्ययन गर्न जुटेको सहमतिबाट समुद्रसँग जोडिने नेपालको चाहना साकार हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, यो त्यति सहज छैन र पत्याउने आधार पनि छैन । अर्को, यसबाट नेपाल आफैले यसबाट हुने दीर्घकालीन लाभहानिबारे भने राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । के नेपालको विकास प्राथमिकता जलयातायात मात्र हो ? पानी जहाज नभएकालै नै हाम्रो समृद्धि रोकिएको हो त ? अनि विश्वमा पानीलाई लिएर भएको र हुन सक्ने युद्ध तथा यसको दीर्घकालीन रणनीतिबारे नेपालले चनाखो हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैनन् ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि नेपाल भारतबीच सहमति भएको अढाइ दशक बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छैन । जलमार्गको सपना देख्नुअघि यो तथ्यलाई बिसर्न हुँदैन ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि नेपाल भारतबीच सहमति भएको अढाइ दशक बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छैन । जलमार्गको सपना देख्नुअघि यो तथ्यलाई बिसर्न हुँदैन । भारत निकै महत्त्वाकांक्षी नदी जोड परियोजनामा काम गरिरहेको छ । यसका लागि उसले नेपालका तीन ठूला नदीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यस्तोमा भारतले गंगानदीमा चलाउन लागेको पानीजहाजबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना कत्तिको सफल हुन्छ भन्नेमा नेपालले विशेष अध्ययन गरेको पाइँदैन । भारतले आफ्ना नदीहरूलाई जोडेर कोलकाताको हल्दियाबाट साना पानीजहाजमार्फत सामान ढुवानी गर्ने सोचले काम गरिरहेको छ । नेपाल कोशी नदीमार्फत भारतको हल्दिया–बनारस जलमार्गसँग र गण्डकीबाट गंगाको पटनासम्म जोडिन सक्ने तर्क अघि सारिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो असम्भव देखिँदैन तर कुनै पनि योजनाको राम्ररी अध्ययन नगर्ने र थालनी भएका आयोजनाको निर्माणमा पनि दशकौं समय लगाउने नेपालको कार्यशैली हेर्दा जलमार्गको उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ । अर्को, भारतीय स्वार्थको विश्लेषण गर्न र त्यसअनुसार नीति अवलम्बन गर्न पनि नेपाल चुकेको छ । त्यसो हुँदा जलस्रोत सम्बन्धी प्रायः सम्झौतामा नेपाललाई अपेक्षित फाइदा पुगेको छैन । त्यही विषय नेपालको राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको तथ्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।
जलमार्गका लागि नदीको बहाव गति, नदीको गहिराइ र नदीमा रहेको अवरोधलाई प्रमुख रूपमा हेर्नुपर्छ । कोशी ब्यारेज र गण्डक बाँधभन्दा मुनिको पानीको बहाव जलमार्गका लागि अपुग छ । भारतले सिँचाइका लागि पानी कटाएर नदीको प्रवाह बढाउन मान्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यस्तै नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माण लगायतका थुप्रै भौतिक पूर्वाधार नबनाई अहिलेकै अवस्थामा पानी जहाज चलाउन सकिँदैन भन्ने विज्ञहरूको विचार पाइन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त कोशी बा“धको विकल्पमा भारतले उच्च बाँध बनाउन खोजेको र त्यसले नेपाललाई हुने लाभहानिबारे धेरै विवाद भएकाले यसले थप विवाद निम्त्याउने देखिन्छ ।
भूपरिवेष्टित भएकै कारण नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार महँगो भएको छ । स्थल यातायातभन्दा जलयायातायतबाट ढुवानी गर्दा सस्तो पर्छ भन्ने आकलन छ । तर, यस हिसाबमा पनि ‘किन्तु’ ‘परन्तु’ धेरै छन् । भारतको पानी रणनीति के हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । यस्तोमा भारतले नेपाललाई सहयोग गरे जस्तो गरी आफ्नो महत्त्वाकांक्षी र दीर्घकालीन रणनीति अनुकूल काम गर्न सक्छ जसले नेपाललाई दीर्घकालीन हानि हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता सबै पक्षको अध्ययन नगरी जलमार्ग भन्दै सम्झौता गरिहाल्नु राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्छ ।
पानी रोकेर रोकिँदैन, बगेर भारततिरै गइरहेको छ । तर, त्यसलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा नेपालले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । पूँजी, ज्ञान र प्रविधिको अभाव आप्mनो ठाउँमा होला । तर, देशभित्र पानीको उपयोगलाई लिएर हुने राजनीति अवरोधको एउटा कारण हो । त्यसैले जलमार्गका विविध पक्षमा अध्ययन नगरी पानी जहाज ल्याएको जस लिने होडमा लाग्दा नेपालले पानीमाथिको अधिकार गुमाउन पनि सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
जलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति
सीमासम्मको जलमार्गबाट लाभ लिन नेपाललाई भारतको प्रस्ताव